Gaas oo sanad kadib tagay Garowe + Ujeedka safarkiisa. – Al-Hurriyah
Article Updated:	March 7, 2020
Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta sanad kadib dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal, halkaasi oo sii diiran loogu soo dhoweeyey.
Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland oo uu ugu horreeyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa Gaas iyo wafdigiisa uga hortagay garoonka diyaaradaha ee Garoowe.
Cabdiweli Maxamed Gaas oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horreyn ka mahadceliyey, soo dhoweynta loo sameeyey, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinkiisa.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeedkiisa uu yahay ka qeyb galka shirweynaha 15-ka bishaan ka furmi doono magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, kaas oo uu iclaamiyey madaxweynaha hadda talada haye ee Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni).
Waa socdaalkii ugu horreeyey 13 bil kadib uu Gaas ku tegayo Puntland, tan iyo markii looga adkaaday doorashadii ka dhacday maamulkaasi.
Puntland ayaa isku diyaarineyso qabashada shir looga hadlayo doorka ay ku leedahay dowladnimada Soomaaliya, kaas oo lagu marti qaaday saamileyda maamulkaasi.
Xildhibaanada Baarlamaanka Dowlad goboleedka koofurgalbeed Soomaaliya ayaa Maanta Guddoomiye…
Wararka aanu ka heleyno magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowladd gobaleedka galmudug ayaa…
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigay Horjoogihii Al-shabab…
Madaxweynaha dowladd gobaleedka Puntiland ,Siciid Cabdullaahi Maxamed (Dani) ayaa gudoomiyay…
Xarakada al-shabaab ayaa weerark ku qaaday saldhig ciidanka Kenya ay ku lee yihiin duleedka magaalada…
Golaha Aqalka Sarre ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ku yeeshay xarunta Aqalka Sarre Kulakii 19-aad ee Kalfadhiga 6-aad iyadoona oo uu shir Guddomiyay Guddomiyaha Aqalka Sarre Senatar Cabdi Xaaahi Cabdullahi, sidoo kalana uu goob jog ahaa Guddomiye Ku-Xigeenka…
Madaxweynihii hore ee Dowladii KMG aheyd ahna Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in madaxada qaranka looga baahan yahay in sharciga iyo dastuurka dalka ay ku maamulaan waxa uu sheegay in soomaaliya ay wax ku…
Wasiirka Batroolka oo beryahaanba ku sugnaa Dalka Suudaan ayaa booqday shirkadaha iyo Xarumaha kala duwan ee ka shaqeeya shidaalka iyo Macdanta dalka Suudaan laga leeyahay, iyaoo booqashada ku wehliyay Safiirka JF Soomaaliya Maxamed Sheikh Isxaaq iyo madaxa…